To all Burmese at rfa U all really know that rohingya are not our ethnic group.God will punish you all as well as your families, liars.
ဘက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပေးတာ အရမ်းသိသာတယ် ပုလင်းတူဗူးဆို့တွေကတော့ တသံထဲထွက်နေတာ ဘာကောင်တွေမှန်းကိုမသိဘူး ငါတို့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တာကိုလက်ခံခိုင်းတဲ့ကောင်တွေလဲ မင်းတို့နိုင်ငံမှာခေါ်ထားလိုက် လူသားခြင်းစာနာတတ်လွန်းရင် Jun 29, 2012 04:27 AM
ဘိန်းစားအချင်းချင်း ညီးညွှတ်နေကြတာ အဆန်း မဟုတ်ပါ။ Jun 28, 2012 12:19 PM
အထက်ပါကဲ့သို့ပြောဆိုနေမှုများကြောင့်ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်၊ရက်စက်ယုတ်မာသတ်ဖြတ်၊မီးရှို့နေမှုများအား မြန်မာပြည်သားအားလုံးက မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို တုန့်ပြန်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီဟု ညွှန်ပြနေပါသည်။
WE REALLY DON"T WANT TO ACCEPT ROHINGYA(LAIR) IN OUR FATHERLAND ANYMORE. PLEASE GO 3RD COUNTRIES.
San R Zarni
U all Go and Die for Rohingyar.Don't make problem any more for Rakhine State. Jun 28, 2012 10:53 AM
ခွေးဟောင်တိုင်း ခဲမပေါက်ကြရန် သက်ဆိုင်ရာတွေကို ပြောပါရစေ...
ရိုဟဟင်ဂျာအမည်ခံကုလားတွေဟာ ဘာလာဒင် နောက်လိုက်တွေသာဖြစ်ပါသည်....
သူတို့အပြောတွေကို နားယောင်သူတွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ WTC ကို အမှတ်ရကြစေလိုပါသည်...
အသိကို သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး သမိုင်းနောက်ခံကို လေ့လာကြပါ...
Hello Tun Khin,
You need to take alook mirror. What you see you will know. Who let from Bingalar by plane " they are Bingalar, by boat they are call as Rohingya." S they are same colour, same face and same language. Why you talk they are myanmar citizens. Can you prove that by DNA test.. Jun 28, 2012 07:46 AM
Jun 29, 2012 02:19 AM
ကိုထွန်းခင်၏တင်ပြချက်မှာမှန်ပါတယ်။ အစိုးရက ကျောသား ရင်သားခွဲခြားတာက အလွန်တရာ ၀မ်းနည်းစရာပါ။ ဥပဒေသည် အားလုံးအတွက် ပုံစံတမျိုးတည်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ယခုအဲသလိုမဟုတ်ဘဲ လိမ်ညာပေါင်းစုံနှင့် မွတ်ဆလင်တွေကိုဘဲ အပြစ်ပုံချပါတယ်။ အစိုးရ ဆိုရာတွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများပါဝင် နေလို့ပြောတာပါ။ တရားဥပဒေအရ အပြစ်လုပ်သူကိုပြစ်ဒဏ်ပေးရင် ဘာမှမပြောလိုပါ။ အဲသလိုမှ မလုပ်တာ ရှာရှာပြီ ရိုဟင်ကို ဘဲ တဘက်သက်လုပ်နေတဲ့အပေါ် မှာ ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲ။
Brouk didn't mentioned about violence committed by so-called Rohingyas.
Rohinja( Binggali invaders)raping regional national is disappearing. Why they don't prove? They are same kinds of religious invaders who make Burma asachao country upside down all citizens stay peacefully under teaching of Buddha.